Esi gbanwee oke leta na Google Chrome | Gam akporosis
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị ahụ na-esiri ike ịgụ ọdịnaya nke ibe weebụ ụfọdụ, nkuzi a bụ maka gị. Mụta ịgbanwe oke akwụkwọ ozi na Google Chrome mfe, ma ọ bụ mee ka ha bawanye ma ọ bụ mee ka ha dị obere.
Ọ bụghị ibe weebụ niile na-akwado nhazigharị nke akwụkwọ ozi ahụ site na ihe nchọgharị Google maka gam akporo, ọ bara uru ịkọ, mana ọtụtụ na-eme, yabụ n'okpuru anyị kọwara otu esi eme nke a n'ụzọ dị mfe ma dị irè.
Yabụ ị nwere ike ịgbanwe oke leta dị na Google Chrome
Iji malite, ozugbo anyị mepere Google Chrome na ekwentị anyị, anyị na-aga n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ wee pịa akara nke akara atọ. Mgbe ahụ, na windo gosipụtara, anyị na-achọ igbe nke Nhazi, nke bu akuku nke anyi aghaghi iru.
Mgbe e mesịrị, ugbua na ngalaba nke Nhazi, anyị ga-achọpụta igbe ahụ Ịnweta, nke bụ otu n'ime nke anyị ga-ahụ ogwe ndozi ederede nha. Site na ndabara, nke a bụ 100%, mana anyị nwere ike ịgbanwe nke a n'etiti 50% na 200%. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ihe pere mpe bụ, pere mpe mkpụrụedemede nke ibe weebụ ndị kwekọrọ na ntọala a ga-egosipụta, ihe megidere ya na ikpe a na-abawanye ya, dịka ọmụmaatụ, 180%.
Ozugbo emere ihe a niile, anyị nwere ike ịhazigharị oke mkpụrụedemede dị na Google Chrome maka ngosipụta nke ibe weebụ ka ọ masị anyị.
Ọ bụrụ na nkuzi a enyerela gị aka, ịnwere ike lee ndị dị n'okpuru anya:
Otu esi eme ka onye enyemaka Google rụọ ọrụ na Google Chrome
Otu esi eme nyocha nyocha na Google Chrome
Etu esi gbanyụọ elebanye anya grid ọhụụ Chrome
Esi gbanwee engine search na Google Chrome na ekwentị gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Etu esi gbanwee oke leta na Google Chrome
YouTube na-enye gị ohere igwu vidiyo 4K ọbụlagodi na anaghị akwado ihuenyo ahụ